के जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुँदै छ ?
सरकार मातहतको प्रतिष्ठान रित्तिँदै, जनजाति आयोग गठन भएन
वैशाख १९, २०७७ गणेश राई
काठमाडौँ — सरकार मातहत कुनै एक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनु त्यत्ति अनौठो होइन । तर, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी रिक्त भएसँगै सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
चारवर्षे कार्यकाल सकिएसँगै प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ र सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीको यही वैशाख २६ गते बाहिरिँदै छन् । गुरुङ तत्कालीन सत्ता साझेदार राप्रपा र माझी एमालेबाट नियुक्त हुन् ।
‘सरकारले अब प्रतिष्ठान खारेज गर्ने हो कि ?’ संशय व्यक्त गर्दै आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव प्राध्यापक डा. ओम गुरुङ भन्छन्, ‘संविधानमै व्यवस्था भएको आदिवासी जनजाति आयोगसमेत अहिलेसम्म गठन गरेको छैन । प्रतिष्ठान खारेज गरेर आयोग गठन गर्न लागेजस्तो बुझिन्छ ।’
अधिकारकर्मी र अभियनताहरू आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई सात दशकभन्दा लामो आदिवासी आन्दोलनको उपजका रूपमा लिन्छन् । तत्कालीन प्रजातान्त्रिक सरकारले विगतको राज्यसत्ताले हेलाहोचोमा राखेको समुदायको पहिचान उजागर गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ जारी गर्‍यो । ‘जनजाति’ भन्नाले सामान्यतया आफ्नै मौलिक भाषा र संस्कृति भएका, सामाजिक विकासका दृष्टिले अन्य जाति भन्दा पछि परेका’ भनेर गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भएसँगै प्रतिष्ठान गठन भएको हो । त्यसअघिको विकास समिति खारेज भयो । उक्त ऐनले ‘आदिवासी जनजाति’ को परिभाषामा ‘आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ’ उल्लेख छ । ऐनको दफा–४ (१) मा ‘प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ’ उल्लेख छ ।
ऐनअनुसार ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत छन् । जसलाई लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधा वञ्चित र उन्नत समूहमा वर्गीकरण गरिएका छन् । प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित समुदायको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास तथा उत्थानजस्ता सर्वांगीण विकास गर्नु रहेको छ । उनीहरुको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहास, परम्परागत ज्ञान तथा सीपको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्नु हो । त्यसअनुसार कुसुन्डा, राउटे, चेपाङ, राजी, कुशवाडियालगायत अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जातिको पहिचान उजागर हुन सकेको समाजशास्त्री डा. गुरुङको ठम्याइ छ ।
अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दर आयोग गठन नभएको अवस्थामा प्रतिष्ठान रिक्त भएसँगै आदिवासी जनजाति समुदायका निम्ति सरोकार निकाय शून्य हुने बताउँछन् । ‘प्रतिष्ठान पूरै सरकारी इकाइ पनि होइन र पूरै आन्दोलनको काम गर्ने पनि होइन,’ मल्ल भन्छन्, ‘बीचको भूमिकामा रहेर काम गर्न स्थापना भएको हो । सुरुको केही वर्ष सीमाभित्र रहेर उद्देश्यअनुसारका कामहरू गरेको थियो । प्रतिष्ठानको क्षेत्र बृहत् छ तर पछिल्लो नेतृत्व फितलो भएपछि तलब भत्ता लिने निकायमात्र बनेको स्थिति छ ।’
संघीयता लागू भएसँगै प्रतिष्ठानको बजेट तथा कार्यक्रम कटौती गरिएका छन् । स्थानीय सरकारमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थान तथा सशक्तिकरण बजेट दिइने भनिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको उनले बताए । ‘प्रतिष्ठान सरकारको मात्र भर पर्नु पर्दैनथ्यो, स्वायत्त निकाय भएकाले अरु स्रोत जुटाएर उद्देश्यअनुसार काम गर्नुपर्थ्यो तर त्यो भएन,’ मल्ल भन्छन्, ‘आदिवासी जनजातिका जेजति मुद्दाहरु छन्, प्रतिष्ठानले त्यसको उठान गर्न, गराउन सकेन । जागिरे मनोवृत्तिमात्र रहेको छ ।’
समाजशास्त्री गुरुङ मुद्दाप्रति अनभिज्ञ व्यक्तिलाई दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएकाले प्रतिष्ठान निष्क्रिय बन्न पुगेको उल्लेख गर्छन् । ‘प्रशासनिक क्षमता, योग्यता भएका व्यक्तित्व पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा २०६२/६३ पछि धेरै राम्रो काम गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले हैसियत गुमाउँदै गयो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय भएकाले कि शक्तिशाली प्रतिष्ठान गठन गर नत्र राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने निकाय नबनाऊ । पहिचानको नाम सीमित कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने काम बन्द हुनुपर्छ ।’
सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीले प्रतिष्ठान स्थापनाको करिब दुई दशकमा केही महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम भएको बताए । उनका अनुसार सूचीकृत आदिवासी जनजातिमध्ये करिब ४५ वटाको अध्ययन अनुसन्धान गरी इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल पुस्तक कृति प्रकाशित छन् । त्यसैगरी विभिन्न मातृभाषाका साहित्य कृति प्रकाशित छन् भने मातृभाषा सेवामा संलग्न स्रष्टालाई पुरस्कृत गरिँदै आएको छ । प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ । तर, आरक्षण व्यवस्थामा उपयोग हुनुपर्ने उक्त परिचयपत्र सरकारको सबै निकायले मान्यता दिएका छैनन् । त्यसैगरी प्रतिष्ठानले राउटेलगायत लोपोन्मुख समुदायलाई वार्षिक रुपमा राहत दिने गरेको छ । भाडाको घरमा सञ्चालित प्रतिष्ठानमा हाल ९ शाखा अधिकृतसहित ३४ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
प्रतिष्ठान ऐनबिनै सूचीकरण
मुलुकका आदिवासी जनजातिको सूचीकरण कार्य प्रतिष्ठान ऐनअनुसार हुनुपर्छ । तर पछिल्लो पटक सरकार तथा संसदबाट ‘राना थारु’लाई छुट्टै आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरियो । उक्त प्रक्रिया गलत भएको प्राध्यापक ओम गुरुङ बताउँछन् । सरकारले गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये फ्रि र छैरोतन जाति नपाइएकोले खारेज हुनुपर्ने र वनकरिया/प्रजा जाति चेपाङ नै भएकोले त्यसमा समाहित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै, सबैगरी ८२ वटा आदिवासी जनजातिको नयाँ सूचीसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सोनाहा जातिले आफूलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले सोनाहालाई आदिवासी जनजातिमा समावेश गर्न भनेको थियो । राना थारु र सोनाहा सूचीकृत गर्नेबारे प्रतिष्ठानलाई कुनै जानकारी नरहेको सदस्यसचिव माझीले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १७:१०